Natomboka ny 10 mey teo ny fampiasana ny vaksiny covishield azo anatin'ny ezaka Covax - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Ny minisitry ny Fahasalamam-bahoaka, Prof. Rakotovao Hanitrala Jean Louis, no nisantatra tamin’ny fomba ofisialy ny fanaovana vaksiny hiadivana amin’ny aretina covid-19. Notronin'ireo diplômaty vahiny miasa sy monina eto amintsika ary ireo mpiara-miombon'antoka miara-miasa amin'ny fitondram-panjakana malagasy izy tamin’izany fotoana izany. Ny fahatongavan’ireo diplomaty sy mpiara-miombon’antoka ireo no ahatarafana fa ezaka niarahana tamin’izy ireo izao fanaovana vaksiny izao. Tafiditra ao anatin’ny Initiative Covax (karakarain’ny OMS sy ny firenena mikambana) ihany i Madagasikara na tsy nanaja ny fe-potoana farany tany amin’ny volana novambre 2020 aza.
« Tsara ny mampahatsiahy fa tsy an-tery fa an-tsitra-po ary maimaimpoana ny fanaovana vaksiny » hoy Atoa minisitry ny fahasalamana ny alatsinainy 10 mey lasa teo.
Nahazo vakisiny 250 000 isa i Madagasikara ao anatin’io initiative Covax io. Raha ny fahazoana ny resaka dia olona 125 000 no hisitraka an’io vaksiny io.
Nitohy teny Faravohitra, eo amin’ny foibe toeran'ny Amadia, ny fanaovana vaksiny Covid-19 taorian’ny fanokafana teny amin’ny CHUJRA Ampefiloha. Nidera sy nankasitraka ny fahavononan'ireo diabetika nisafidy isitraka ity vaksiny ity ny Pr Rakotovao Hanitrala Jean Louis Minisitry ny Fahasalamam-bahoaka ary nankasitraka ihany koa ny ezaka ataon'ny fitondram-panjakana ankehitriny ho fiarovana ny vahoaka malagasy rehetra manoloana ity ady amin'ny Covid-19 ity.
Fantatra nandritra izany fa afaka misitraka ity vaksiny ity eny amin'ny Foibe Amadia avokoa ireo manana toe-batana diabetika rehetra na tsy mpikambana ao amin'izany aza.
Vaccination ciblée no ataontsika hoy ny minisitra nanazava. Izany hoe ireo Mpiasan'ny Fahasalamana izay miatrika mivantana ny covid-19, ireo Mpitandro ny filaminana, ireo Zokiolona 70 taona no miakatra, ireo olona diabetika sy ireo olona marefo no hisitraka izany.
Ny vakisiny Covishield no azon’ny governemanta ao anatin’ny initiative Covax io. Izay mitovy lenta amin’ny Astrazeneca ihany. Ny Covishield dia novokarin’ny indiana (Serum Institute of India (SII) miainga amin’ny fifanarahana tamin’ny mpamorona ny Astrazeneca (AstraZeneca).
Tsy an-tery ny fanaovana vakisiny fa kosa tsy maintsy arahana ireo fepetra ara-pahasalamana. Omena fahalalahana ny tsirairay amin’ny fanaovana ity vakisiny ity.
Isan’ny tsy mazava hatreto ny toerana hanaovana ny fisoratana anarana raha te hisitraka an’io vaksiny io.
Marihina fa efa talohan’izao fanokafana amin’ny fomba ofisialy ny fanaovana vaksiny izao no efa nanao vakisiny ny mpiasany orinasa tsy miankina afaka nanafatra sy ny sehatra iraisam-pirenena. Ny frantsay dia nanokatra toerana hanaovana vakisiny olona mizaka zom-pirenena frantsay sy eoropeanina ka eny Ivandry (vila Charmilles) no toerana hanaovana izany.